Global Voices teny Malagasy » Tsy Irery Ireo Bilaogeran’ny Zone9: Mpiserasera Ethiopiana Maro Ihany Koa No Voampanga Amin’ny Fampihorohoroana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Septambra 2015 5:40 GMT 1	 · Mpanoratra T Tekle Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Etiopia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Teknolojia, Zon'olombelona
Ankavia miankavananat: Zelalem, Yonatan, Bahiru sy Abraham. Sary nahazoana alalana avy amin'ny debirhan.com.
Maro be ireo bilaogera Ethiopiana, mpikatroka antserasera sy mpanao politika izay mbola tsy ao anaty sarintany ny anaran'izy ireo. Ankoatra ny raharaha malaza Blaogeran'ny Zone 9 , misy ihany koa ireo tanora hafa marobe miatrika fiampangana mitovy amin'izany.
Tamin'ny herintaona tamin'ny 8 Jolay 2014, nogadrain'i Ethiopia ireo lehiben'ny mpanohitra, bilaogera, mpikatroka antserasera sy olom-pirenena voakasika ao an-toerana. Navotsotra ny sasany taorian'ny famotopotorana naharitra efa-bolana. Na izany aza, voampanga  tamin'ny Fanambarana Laharana 652/2009 noho izy ireo mifandray amin'ny vondron'ny mpanohitra Etiopiana am-pielezana tahaka ny Ginbot 7  ny folo tamin'ny 31 Oktobra 2014, nangataka hiatrika fiofanana momba ny fiarovana antserasera  sy ny fikatrohana anaty aterineto izy ireo. Tsy mpikambana amin'ny antoko politika ny telo amin'ireo 10 voampanga fa olom-pirenena tsotra izay nosamborina noho ny fangatahana fanatrehana fanofanana. Zelalem Workagenegu, Yonatan Wolde sy Bahiru Degu ireo telo ireo.
Nolaniana tamin'ny volana Jolay 2009 ny Lalàna manohitra ny fampihorohorona Laharana 652/2009  mampiadihevitra. Mikasa hiaro ny lalàna ireo manampahefana Ethiopiana amin'ny alalan'ny filazana fa nalaina tahaka tamin'ny lalàna efa misy ao amin'ny firenena tahaka an'i United Kingdom (UK na Angletera) ity lalàna mampiadi-hevitra ity.
Ny Fehezan-dalàna faha-6 momba ny Fanambarana Manohitra ny Fampihorohoroana, izay nampiasaina mba hampihenana ny fahalalaham-pitenenana, ohatra, dia milaza fa:
Na iza na iza mamoaka na manao lahatsoratra fanambarana izay azo antoka fa takatry ny olona sasany na ny vahoaka nandefasana azy ho toy ny fandrisihana mivantana na ankolaka na tombotsoa hafa ho an'ireo vaomiera na fiomanana na fampirisihana asa fampihorohoroana [dia iharan'ny sazy 10 sy 20 taona an-tranomaizina].
Mpikatroky ny zon'olombelona ary mi-bilaogy ao amin'ny DeBirhan  i Zelalem, voampanga voalohany. Yonatan sy Bahiru, izay azo sokajiana ho olom-pirenena voarohirohy kosa dia nangataka fiofanana momba ny fiarovana anaty aterineto sy ny media sosialy niaraka tamin'i Zelalem izay nampahafantarin'ny mpanao gazety Ethiopiana iray monina ao Etazonia. Hita tany amin'izy ireo ny mailaka avy amin'ity mpanao gazety Ethiopiana monina ao Etazonia ity. Raha notànana i Zelalem, nosamborina ihany koa ireo tanora ireo ary avy eo voampanga ho nangataka “fiofanana fampihorohoroana” raha fiofanana momba ny fiarovana anaty aterineto no tena marina.
Eo amin'ny 7-9 Novambra 2015 eo ny fotoam-pitsarana manaraka an'i Zelalem, Yonatan sy Bahiru.
Noafahan'ny  fitsarana Ethiopiana madiodio i Abraham Solomon tamin'ny volana lasa, nogadraina noho ny fifandraisany amin'ny voampanga voalohany Zelalem, miaraka amin'ireo mpanao politika mpanohitra efatra antsoina hoe Abraha Desta, manampahefana ao amin'ny Antokon'ny mpanohitra Arena Tigray sady mpikatroka media sosialy, Yeshiwas Assefa, mpikambana ao amin'ny Antoko Manga (Semayawi), Daniel Shibeshi, manampahefana tao amin'ny Antoko Firaisana Hoan'ny Demaokrasia sy ny Fahamarinana (UDJ), antoko efa tsy misy intsony ary i Habtamu Ayalew, Lehiben'ny Serasera teo aloha tao amin'ny antoko UDJ efa maty. Na izany aza, mbola tsy navotsotra izy ireo hatramin'izao satria voalaza fa nampiakarin'ny Mpampanoa lalàna any amin'ny fitsarana ambony nyfitsarana.
Mampiseho ny fitomboan'ny ezaka fanampenam-bava an'ireo mpikatroka antserasera sy ny mpiserasera ao Ethiopia ny lahatsoratra navoakan'ny Fikambanana Electronic Frontier (EFF) . Niantso an'i Ethiopia ny fikambanana mba:
Hamotsotra avy hatrany ireo mpanao gazety rehetra any am-ponja, anisan'izany ireo bilaogera sisa ao amin'ny Zone 9, ary afaho amin'ireo fiampangana rehetra amin'ny “heloka” amin'ny fitateram-baovao izy ireo.
Atsaharo ny fanenjehana ireo olona amin'ny fanohizana fiofanana momba ny fiarovana sy ny fampiasana teknolojia sora-miafina, ary avotsory i Zelalem Workagegnehu, Yonatan Wolde, Abraham Solomon ary i Bahiru Degu.
Argaw Ashine nanoratra tamin'ny 21 Septambra 2015
Zelalem,Yonathan,Abreham &Bahiru accused 4 terrorism unfairly jailed.Zy only applied 4 Internet sec training,which never happened. #Ethiopia 
— Argaw Ashine (@argawnmg) September 21, 2015 
Nogadraina tsy ara-drariny i Zelalem,Yonathan,Abreham &Bahiru voampanga amin'ny fampihorohoroana. Nangataka fiofanana momba ny fiarovana aterineto fotsiny i Zy, izay mbola tsy nisy mihitsy hatrizay.
Nangataka tamin'ny governemanta Ethiopiana mba hampitsahatra ny fampiasana teknolojia hitsikilovana mpiserasera ihany koa ny EFF:
Atsaharo ary ialao ny fampiasana teknolojiam-pitsikilovana miroborobo toy ny FinFisher sy ny Rafitra Fanaraha-maso Lavitra Hacking Team mba hitsikilovana ireo “mpanao gazety Etiopiana, Am-pielezana sy vondrona mpanohitra”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/24/74924/
 Maro be : https://advox.globalvoices.org/categories/regions-countries/ethiopia/
 Blaogeran'ny Zone 9: https://advocacy.globalvoicesonline.org/behind-bars-in-ethiopia-campaign-to-free-the-zone9-bloggers/
 nogadrain'i : http://www.ethiomedia.com/17file/2472.html
 Fanambarana Laharana 652/2009 : http://www.refworld.org/docid/4ba799d32.html
 hiatrika fiofanana momba ny fiarovana antserasera: http://debirhan.com/?p=6810
 Lalàna manohitra ny fampihorohorona Laharana 652/2009: http://chilot.me/2011/01/20/a-proclamation-on-anti-terrorism-proclamation-no-6522009/
 Fikambanana Electronic Frontier (EFF): https://www.eff.org/deeplinks/2015/07/civil-liberties-under-threat-ethiopia
 September 21, 2015: https://twitter.com/argawnmg/status/646042070595989504